यस लेखबाट तपाईंले कसरी फोटोशपमा झिकेर हटाउन सिक्नु हुनेछ। तपाईंलाई उपलब्ध सबै जानकारीको लागि अत्यन्तै ध्यान पर्नेछ। यस कार्यक्रमको लागि फोटोशॉप धेरै लोकप्रिय छ। र प्रायः मानिसहरूले यो उपस्थिति सुधार गर्न एक माध्यमको रूपमा जान्दछन्। सबै पछि, "फोटोशप" सँग यस अपरेशनको लागी धेरै उपकरणहरू छन्। अर्को, हामी फोटोशपमा कसरी झिकेर हटाउने मुद्दामा छलफल गर्नेछौं।
तुरुन्त यो यो लायक छ कि तपाइँ यस ग्राफिक सम्पादकको कुनै गहिरो ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। यो विधिले तपाईंलाई तुरुन्तै आँखामा झन्डा हटाउन अनुमति दिन्छ । यस मामलामा तस्बिर सर्वोच्च विस्तारको साथ चयन गरिएको छ। त्यसैले तपाइँलाई सिक्न सजिलो हुनेछ। यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाइँ पहिलो पटक अन्य तस्वीरहरूसँग अभ्यास गर्नुहोला, र त्यसपछि मूल सम्पादन गर्न सुरु गर्नुहोस्।
यो म्यानुअल प्रोग्राम "नयाँ फोटो" को लागी डिजाइन गरिएको छ। शुरुवातका लागि यो विधि आदर्श छ। तर यदि तपाईले पहिले नै फोटोहरू पुन: प्राप्त गर्ने अनुभव पाउनुभयो भने, तपाइँ यो निर्देशन पढ्न पनि उपयोगी हुनेछ। चरणहरू:
छवि सम्पादकमा हाम्रो छवि थप्नुहोस् । "Ctrl + J" कुञ्जी संयोजन प्रयोग गरी पृष्ठभूमि छविको एक प्रतिलिपि सिर्जना गर्नुहोस्।
थप कार्यहरू मुख्य तहको डुप्लिकेटमा प्रदर्शन गरिन्छ। "प्याच" उपकरण चयन गर्नुहोस् (बटन "J"), यसलाई "स्रोत" मोडमा राख्नुहोस्। हामी यस उपकरणको साथ झुर्रकहरू चयन गर्छौं। यो गर्नका लागि, बायाँ-क्लिक (LMB) अनुहारको आवश्यक क्षेत्र सर्कल गर्नुहोस्। पानाकार्य जारी गरौं। र एक पटक फेरि, हामीले पहिले नै चयन गरिएको क्षेत्रलाई संकेत गर्दछौं, फेरि LMB थिच्नुहोस्। बटनहरू जारी नगरी, यो भाग झन् झन् झन् झन् झन् झिम्किएको र अन्य खण्डहरूमा। हामी यी सबै कार्यहरू अनुहारको अन्य क्षेत्रको साथ दोहोर्याउँछौं।
हामीले आँखाको तल झिकेर विचार गरिरहनु भएकोले, अनुहारको दोस्रो भाग क्रमशः दोस्रो आँखामा सेवा गर्नेछ। र कार्यहरू पहिले नै एक नयाँ तहमा सारिनेछ। फलस्वरूप, मुख्य कार्य सम्पन्न भएपछि, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि अनुहार अब अनैतिक देखिन्छ। यस समस्याको समाधान अलग से प्रत्येक तहको अस्पष्टता परिमिति समायोजन गर्नु हो। यो आवश्यक छ कि झिल्ली थोडा फैलिएको छ, तब हाम्रो परिवर्तन यथार्थवादी लाग्दछ।
फोटोशपमा कसरी झिकेर हटाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर जवाफ नभएसम्म हामी कामको समयमा उठ्न एक महत्त्वपूर्ण समस्या विचार नगरेसम्म। प्याच उपकरणको प्रयोगको क्रममा, एक अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ जहाँ छालाको साथ (जहाँ कुनै झुरनाहरू छैनन्) अन्य खण्डहरू (pimples, scars) प्रतिलिपि गरिनेछ। स्वाभाविक रूपले, हामीलाई यो आवश्यक छैन। त्यसैले काम गर्नु अघि फोटो तयार गर्न र यी सबै अभाव हटाउनु आवश्यक छ। यो गर्नका लागि, यो "स्पट पुनर्स्थापना ब्रश" उपकरण प्रयोग गर्न सिफारिश गरिएको छ। यो उपकरणको साथ कार्यलाई नयाँ खाली पत्रमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं "टिकट" उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि तरिका, तपाईं कुनै पनि साधन को प्रयोग संग "अनुहार" को भाग को "दाता" देखि सबै दोषहरुलाई हटाउन को आवश्यकता हो। तलको तस्विरमा तपाईंले कामको परिणाम देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई वास्तविक छविको तुलना गर्नुहोस्।
यो लेख अन्त्यमा आउँदैछ। "फोटोशिप" मा झन्डा हटाउनको प्रश्न कसरी एकदम ठुलो छ, किनकि यसले विभिन्न पक्षबाट सम्पर्क गर्न सकिन्छ। आज तपाईले आँखाको अन्तर्गत झन्डा हटाउन मात्र एक तरिका सिक्नुभयो। तर यो समस्या समाधान गर्न दर्जनौं तरिकाहरू छन्।
कसरी इन्टरनेटमा विज्ञापन रोक्न
संगीत ट्रिमिंग कार्यक्रम
ट्राफिक लेखा कार्यक्रम
RAM लाई कसरी ओभरलेक्क गर्नुहुन्छ? ओभरक्लेकिंग RAM को लागि कार्यक्रम
त्यहाँ एउटा अनार छ? हामी सँगसँगै भेट्ट्यौं
Trongzund गढ Dungeons: ठेगाना, फोटो, संभावनाहरु
विद्यार्थीहरूको लागि रोचक पहेली